वडाध्यक्षको घरबाट चल्छ विद्यालय ! | नुवागी
हरिसुन्दर छुकां/ भक्तपुर । राजधानीसँगै जोडिएको भक्तपुरको एक विद्यालयको कक्षाकोठा एकातिर छ भने शिक्षकशिक्षिकाको कार्यालय एकातिर ।
‘स्कुल त्यता छ, अफिस यता छ ।’ सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. ५ कटुञ्जेको कटुञ्जे आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक यम पी. भुसालले भने । उनले कक्षा एकातिर अफिस अर्कोतिर हुँदा पठनपाठनमा समस्या भएको बताए ।
स्थानीय तहमा शिक्षाका अधिकार आएसँगै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नगरपालिकाले दुई विद्यालय मर्ज गरी एक गरेपछि यस्तो अवस्था आएको हो । सूर्यविनायक नगरपालिकामा २०७४ बैशाखबाट जनप्रतिनीधि चुनिएपछि नगरपालिकालाई भवन बनाउने ठाउँ अभाव भएको भन्दै साविकको महेन्द्र निम्न मावि र सुशील भैरव प्राविलाई एक गरिएको थियो । विद्यालय मर्ज भएपछिको परिणाम अहिले विद्यार्थीले राम्रो भवनसहितको कक्षाकोठा गुमाएका छन् । त्यहाँ पढाउने शिक्षकशिक्षिकलाई अफिस समेत छैन ।
यति मात्र नभएर नगरपालिकाले ती दुई विद्यालय मर्ज गरेपछि ती दुई विद्यालयको नामै गायब बनाएको छ । नगरपालिकाले मर्ज भएका विद्यालयको नामको सट्टा कटुञ्जे आधारभूत विद्यालय भनेर न्वारन गरेको छ ।
‘सर मिसलाई पढाउन जान पनि समस्या छ, अफिसमै बसेर विद्यार्थीको क्रियाकलाप थाहा हुन्न, शौचालयको पनि राम्रो व्यवस्था छैन, केटाकेटीको सुरक्षाको हिसाबले पनि उपयुक्त छैन ।’
मर्जपछि सञ्चालनमा रहेको विद्यालय र अफिस कोठाको दूरी करिब ५० मिटर छ । विद्यालय र अफिस कोठालाई सडकले छुट्याएको छ ।
विद्यालयमै अफिस नहुँदा विद्यार्थी पढाउन जानका लागि पनि समस्या छ भने विद्यार्थीलाई हेर्न पनि समस्या छ ।’ एक शिक्षिकाले भनिन् ।
विसं. २०३२ सालमा स्थापना भएको महेन्द्र स्कुल र २०४५ सालमा खोलिएको सुशील भैरबलाई मर्ज गरेपछि कटुञ्जेको सुशील भैरबस्थानमा सारिएको थियो । त्यसरी विद्यालय सार्दा विद्यार्थीलाई पुग्दो मात्रामा कक्षाकोठा समेत छैन । जम्माजम्मी ८ वटा कक्षाकोठा रहेको सो विद्यालयमा अफिस नभए पछि सोही नगरपालिकाका वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष राजकुमार जोशीले आफ्नै घरमा तीनवटा कोठा अफिसका लागि दिएका छन् । त्यहीबाट विद्यालयका नियमित क्रियाकलाप भइरहेको छ ।
साविकको महेन्द्र निमावि, जसलाई हटाएर सूर्यविनायक नगरपालिकाले आफ्नो कार्यालय बनाउने योजना बनाएका छ ।
साविकको महेन्द्र स्कुलका पनि प्रअ भुसालले नगरपालिकाले गत २०७४ साउनमै विद्यालय मर्ज गर्ने निर्णय गरेको बताउँदै त्यसबेलामै नगरपालिकाले विकल्प नदिइ विद्यालय नसार्ने आश्वासन दिए पनि अहिले कोठा नै नभएको ठाउँमा विद्यालय सार्दा समस्या भएको बताए ।
‘सर मिसलाई पढाउन जान पनि समस्या छ, अफिसमै बसेर विद्यार्थीको क्रियाकलाप थाहा हुन्न, शौचालयको पनि राम्रो व्यवस्था छैन, केटाकेटीको सुरक्षाको हिसाबले पनि उपयुक्त छैन ।’ प्रअ भुसालले भने ।
उनले विद्यालय मर्ज भएपछि पनि विद्यार्थी संख्यामा खासै सुधार नभएको बताए । अहिले त्यहाँ ८३ विद्यार्थी रहेको उनको भनाइ छ । गत जेठको १६ गतेबाट कटुञ्जे आधारभूत विद्यालय बनेको विद्यालयमा विद्यार्थी घटेको नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले जनाएको छ ।
‘विद्यार्थी कम भएपछि हामीले दुई विद्यालय मर्ज गर्यौं । महेन्द्र निमावि भएको जग्गामा हामीले सूर्यविनायक नगरपालिकाको भवन बनाउने भएको छ । भवन नबनुञ्जेलसम्म कोठा नपुग्ने भएको हुनाले त्यस्तो हुन गएको हो।’
‘मर्ज गरेपछि विद्यार्थी बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर उल्टै विद्यार्थी घटेका छन्, नगरपालिकाले आफ्नो ठाउँ बनाउन विद्यालय नै मर्ज गर्दा कतिपय विद्यार्थीले पढाइ नै छाडेका छन् ।’ एक स्थानीयले भने ।
सोही वडाका वडाध्यक्ष राजकुमार जोशीले आफ्नै घरको कोठामा विद्यालयको अफिस रहेको बताउँदै केही समयका लागि पैसा नलिने गरी भाडामा दिइएको बताए ।
नगरपालिकाका मेयर बासुदेव थापाले पनि केही समयका लागि शिक्षकहरुलाई गाह्रो हुने बताए । ‘विद्यार्थी कम भएपछि हामीले दुई विद्यालय मर्ज गर्यौं । महेन्द्र निमावि भएको जग्गामा हामीले सूर्यविनायक नगरपालिकाको भवन बनाउने भएको छ । भवन नबनुञ्जेलसम्म कोठा नपुग्ने भएको हुनाले त्यस्तो हुन गएको हो । महेन्द्र निमाविलाई खाली गराएर हामी त्यहाँ भवन बनाउँदैछौं । महेन्द्र निमावि खाली गराएकै हो । नपाको भवन बनाउन पनि विद्यालय मर्ज गरिएको हो ।’
‘यही हिसाबले सार्वजनिक विद्यालय गइरहने हो भने विद्यालय बन्द गर्ने योजना ल्याउनुपर्छ’